Yaadni walitti makamuu, fedhii ida’amuutin kan walsimatu -hayyoota – Fana Broadcasting Corporate
Yaadni walitti makamuu, fedhii ida’amuutin kan walsimatu -hayyoota
Finfinnee, Onkololeessa 7, 2012 (FBC) – Yaadni walitti makamuu ADWUI, fedhii ida’amuutin kan walsimatu ta’uu hayyoonni Faanaa Broodkaastiing Koorporeet waliin turtii taasisan himan.
Yaadni makamuu humna ofii cimsuudhan, kaayyoo tokkoof waliin dhaabbachuu, hunda hirmaachisuu fi waan gaggaarii itti fufsiisuu waan ta’eef, faayidaan isaa olaanadha jedhu dhimma walitti makamuurratti hayyuun qorannaa gaggeessan Dooktar Tamasgeen Burqaan.
Walitti makamuun dhimmoota addaddaatin dhiibamaa turuu malee haaraa akka hin ta’in kaasu.
Itti aanaan daayreektara Akkaadaamii Hoggansa Naannoo Oromiyaa Dooktar Kabbadaa Gannatiin ammoo paartileen obbolaa ADWUI fi tumsitoonni ADWUI yammuu walitti makaman carraa hundaaf qixa murteessuu ni cima, humna uumas jedhu.
Makamuun garaa hanquuwwan kanaan duraa dhiisuu gaafata waan ta’eef, komiin hin hiikamnee fi hin furamne hin jiraatu; yaada ida’amuu waliinis walsimee deemuu danda’a jedhaniiru.
Hayyoonni lamaan ADWUIn rakkoo qixa hirmaachisuu qaba tures jedhanii, hawaasa siyaas diinagdee tokko uumuuf yaada ture osoo hin milkeessin tureera, kanaaf ida’amuu fi walitti makamuun amma murteessadha jedhaniiru.
Carraa qixa murteessuu waan laatuf, walitti qabamanii tokkoomun cimina uumas jedhu.
Haabtaamuu T/sillaaseetu gabaase.
Obbo Ristuun hospitaala waliigalaa Jiinkaa daawwatan
Agartuu ijaa tola ooltoota irraa argamu walitti qabuuf rakkachaa jiraachuu Baankiin…
Wixineen hojiirra oolmaa barnoota fagoo kutaa 5-12ffaa qopha’aa jira
Waldaan dubartoota magaalaa Finfinnee Injiinar Taakkalaaf kennaa laatan